Ny vavaka ho fiarovana sy fanafahana amin'ny fanafihan'ny fahavalo | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Ny vavaka ho fiarovana sy fanafahana amin'ny fanafihan'ny fahavalo
24 Hesorina amin'ny mahery va ny babo, sa havotsotra amin'ny fahababoana? 25 Fa izao no lazain'ny Tompo: Na dia ny sambon'ny mahery aza dia halaina, ary ny babon'ny mpampahory dia hovonjena; fa Izaho no hiady aminy izay miady aminao ary hovonjeko ny zanakao.
Ny devoly no arisantsika fahavalo, ary miasa amin'ireo manohitra ny demony izy. Androany isika dia handeha hivavaka amin'ny fiarovana ho amin'ny fanafahana sy fanafahana amin'ny fanafihan'ny fahavalo. Ny kristiana rehetra mandresy dia tsy maintsy mivavaka kristiana. Asehoy ahy mpino mpandresy ary hasehoko mpiady mivavaka ianao. Ny devoly dia nivoady hanimba ny ain'ny mpino eto an-tany ary handefa azy ireo any amin'ny helo aorian'izany, saingy tsy maintsy mitsangana isika miaraka amin'ny fahatezerana masina ary mametraka ny devoly izay itoerany, eo ambanin'ny tongotsika. Tsy maintsy mitondra an'io ady ara-panahy io amin'ny tobin'ny fahavalo isika ary handrava izay rehetra misy eritreritra ratsy hanoherana antsika sy ny fianakaviantsika !!! Amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa nahoana ny vavaka no harovana? Tokony ho takatsika fa amin'ny maha-zanak'Andriamanitra dia lasibatra avy amin'ny vavahadin'ny helo isika. Amin'ny maha-mpino azy, dia misy demony tafika, miady amin'ny anjaranao anjara. Hery avy amin'ny herinao io hery io tranom-pianakaviana, tranon'ny reny ary avy amin'ny anao ihany koa fototra. Tsy afaka miantehitra amin'ny fiainanao ianao. Araka ny Deoteronomia 2:24, dia navelan'i Andriamanitra ho antsika ao amin'i Kristy ny lovantsika rehetra, saingy tokony mbola miady amin'ny fahavalo isika mba hankafizantsika. I Kristy dia nitahy antsika amin'ny fitahiana ara-panahy rehetra any an-danitra, mba hampitrandrahana ireo fitahiana ireo dia tsy maintsy miady amin'ny adin'ny finoana ianao, tsy maintsy mazoto amin'ny vavaka ianao, tsy tokony hangozohozo amin'ny ady ara-panahy, amin'izay vao afaka mahazo ny fanananao. Mety ratsy fanahy ny devoly, saingy tsy mahery izy, satria isika manam-pinoana dia manana fahefana amin'ny devoly rehetra, Matio 17:20, Lioka 10:19. Manana fahefana hametraka an'i Satana sy ny demoniany rehetra isika. Isaky ny mivavaka isika dia mampiasa io fahefana ara-panahy io. Ity vavaka ho fiarovan-tena ity dia tsy hiaro anao sy ny fianakavianao amin'ny devoly sy ny mpiasany ihany, hanome hery anao hanomboka hampahory ny fahavalonao rehetra koa amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa ampiarahanao am-bavaka izao anio izao, avelao ho velona ny finoanao, avelao ny devoly ho fantatra fa ianao no mpandraharaha, mivavaha tsirairay amin'ireo teboka am-bavaka miaraka am-pahatezerana masina sy finoana mafy loha, hitako fa ny devoly mandositra ny lalanao sy ny alehanao family amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Ny jinx rehetra amin'ny fiainako sy ny fianakaviako, tapaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Ny tsipelina rehetra amin'ny fiainako sy ny fianakaviako dia tapaka amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Ry tehin'ny fahatezeran'ny Tompo, mankanesa amin'ny fahavalon'ny fiainako sy ny ankohonako rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Anjelin'Andriamanitra, manafika azy ireo ary mitarika azy ireo ho amin'ny maizina, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Ny tanan'ny Tompo, mitodika azy isan'andro isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Tompo ô, avelao ho antitra ny nofony sy ny hodiny ary aoka ho tapaka ny taolany, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Tompo ô, avelao izy hohodinina amin 'ny fanaintainana sy ny fisasarana amin' ny anaran 'i Jeso.
8. Tompo ô, avelao ny anjelinao hamefy azy ireo sy hanakanana ny lalany amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ry Tompo ô, ampio ny mazoto ho anao.
10. Rehefa mitomany izy ireo dia tampeno ny antsoantso ataon'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Jehovah ô, avereno ny lalan'ny làlany.
12. Tompo ô, ataovy ny lalan'ny voapaika amin'ny vato maranitra.
13. Tompo ô, avelao hianjera amin'izy ireo ny herin'ny faharatsiany, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Tompo ô, ampidiro izy, ka zahao azy.
15. Tompo ô, avereno ho rava ny làlany.
16. Tompokolahy, fenoy fangidiana izy ireo, ary aoka ho mamo amin 'ny paiso.
17. Tompo ô, tapiho ny nifiny amin'ny gravel.
18. Tompo ô, hosory lavenona izy ireo.
19. Ry Iaveh, esory lavitra ny fiadanany ary avelao izy ireo hanadino ny fanambinana.
20. Torotoroiko ambanin'ny tongotro, ny hery ratsy rehetra manandrana migadra amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Tompo ô, avelao halevina ao anaty vovoka ny vavany, amin'ny anaran'i Jesoa.
22. Tompo ô, avelao hisy ady an-trano ao an-tobin'ny fahavaloko anio, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Herin'Andriamanitra, alao ny trano mimanda ny fahavalon'ny fiainako sy ny fianakaviako amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Tompo ô, enjehoy sy ario amin'ny fahatezeranao amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ny fanakanana rehetra amin'ny làlako alehako, mazava amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Ny fangatahana demonia rehetra eto an-tany amin'ny fiainako, dia foanana amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Mandà tsy voafatotry ny rojo vy amin'ny toerana nahaterahako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Na iza na iza hery, manery ny fasika amiko, dia mianjera sy maty, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Izaho dia mahazo ny fahatapahana ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Avoako ny volako amin'ny tranon'ny mahery, amin'ny anaran'i Jesosy.
31. Ny ran'i Jesosy sy ny afon'ny Fanahy Masina, manadio ny taova rehetra ao amin'ny vatako, amin'ny anarana
32. Izaho dia nandrava ny fanekena ratsy rehetra teto an-tany, tamin'ny anaran'i Jesosy.
33. Izaho dia nanala ny ozona ratsy rehetra nolovana tamin'ny tany, tamin'ny anaran'i Jesosy.
34. Mialà amin'ny karazana famoronana demonia ambonin'ny tany aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
35. Manafaka ny tenako amin'ny fanapahana ratsy sy fifehezana amin'ny tany aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Ny ran'i Jesosy, afindra amin'ny lalan-drako.
37. Mamoaka ny tahotra amin'ireo fahavaloko manontolo andro amin'ny anaran'i Jesosy aho
38. Ry Tompo, avelao ny fikorontanana mafy setroka ao amin'ny foiben'ny fahavaloko, amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Fisafotofotofako ny fikasan'ny fahavaloko, amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Ny fonenan'ny maizina rehetra, dia mahazo fikorontanan'ny asidra amin'ny anaran'i Jesosy.
41. Natahotra sy kivy be aho noho ny didin'i satana nivoaka tamiko, tamin'ny anaran'i Jesosy.
42. Ny tetika ratsy rehetra manoloana ny fiainako dia misavoritaka, amin'ny anaran'i Jesosy.
43. Ny ozona rehetra sy ny demony rehetra, izay miady amiko dia ataoko tsy miandany aminao amin'ny ran'i Jesosy.
44. Ny ady rehetra, voaomana ho amin'ny fiadanako, dia sorena aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy.
45. Ny ady rehetra, voaomana ho amin'ny fiadanako, dia mametraka loza aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy.
46. Ny ady rehetra, voaomana ho amin'ny fiadanako, dia mametraka korontana aminao aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
47. Ny ady rehetra, voaomana ho amin'ny fiadanako, dia mametraka pandemonia aminao aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
48. Ny ady rehetra, voaomana ho amin'ny fiadanako, dia mandidy loza aminao aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
49. Ny ady rehetra, voaomana ho amin'ny fiadanako, dia mandidy anao ny fisafotofotoana, amin'ny anaran'i Jesosy.
50. Ny ady rehetra, voaomana amin'ny fiadanako, mandidy asidra ara-panahy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy.
51. Ny ady rehetra, voaomana ho amin'ny fiadanako, dia aringako ny fandringanana anao, amin'ny anaran'i Jesosy.
52. Ny ady rehetra, voaomana hiadiana amin'ny fiadanako, dia mandidy ny anjomara an'ny Tompo ho aminareo amin'ny anaran'i Jesosy aho.
53. Ny ady rehetra, voaomana ho amin'ny fiadanako, dia omeko anao ny solifara sy ny havandra, amin'ny anaran'i Jesosy.
54. Izaho dia mamono ny didim-pitsatan'i satana rehetra, navoakan'ny tenako, amin'ny anaran'i Jesosy
55. Ny rantsan-tànanao, ny valifaty, ny fampihorohoroana, ny hatezerana, ny tahotra, ny hatezerana, ny fankahalana ary ny fandoroana ny didim-pitsaran'Andriamanitra, avoahy amin'ireo fahavaloko feno, amin'ny anaran'i Jesosy.
56. Ny hery rehetra, manakana ny sitrapon'Andriamanitra lavorary tsy ho tanterahina eo amin'ny fiainako, mandray ny tsy fahombiazana sy ny faharesena, amin'ny anaran'i Jesosy.
57. Miady anjely sy Fanahin'Andriamanitra ianao, mitsangàna ary aparitaka ny fivoriana ratsy rehetra izay manohana ahy, amin'ny anaran'i Jesosy
58. Tsy mankato ny baiko satana napetraka amin'ny lovako amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
59. Mamatotra sy mamoaka ny fahefana rehetra mahatonga ady anaty aho amin'ny anaran'i Jesosy.
60. Ny mpiandry vavahady rehetra, manilika zavatra tsara amiko, ho mararin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, misaotra anao aho noho ny nanala baraka ny devoly tamin'ny fiainako sy ny fianakaviako amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaky ny Paska manambara ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty
Next lahatsoratraVavaka famelabelarana ho an'ny mpikamban'ny Fiangonana
B. Jamez 10 Mey 2019 Amin'ny 5:09 maraina
Mari 6 Febroary 2021 Amin'ny 6:02 maraina
Gloria McQueen 17 septambra 2021 amin'ny 11:40 hariva
Amena, raisiko amin'ny anaran'i Jesosy izany
Hivavaka ho an'ny fahamasinana